डेसर्ट - बेजिया | बेजिया
को डेसर्ट तिनीहरू मिठो वा बिटरवीट भाँडा हुन् जुन प्राय मुख्य भोजन पछि खाइन्छन्, चाहे तिनीहरू क्रिम, केक, केक, आइसक्रिम, चकलेटहरू, आदि हुन्। सामान्यतया तिनीहरूको ठूलो क्यालोरिक र दमदार योगदान छ, तर बेजियामा हामी स्वस्थ मानिसहरूलाई पनि खान दिनेछौं।
यदि डेसर्टहरू केहि चीजको विशेषता हो भने, यो तिनीहरूमा रहेको अनन्तताका कारणले हुन्छन् र बिभिन्न प्रकारहरू लिन सक्छन्। यो यस्तो छ किनकि त्यहाँ सबै तापक्रम र बनावटहरूमा मिठाइहरू छन् (एकै समयमा, तातो, चिसो, स्थिर र मिश्रित)।
यो डिशले सामान्यतया मानिसहरूलाई खुशी पार्छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई समर्पित सेक्सनमा आमन्त्रित गर्न हिचकिचाउँदैनौं डेसर्ट व्यंजनहरु।
कद्दू पाई र गाढा दूध
के तपाईंलाई कद्दू मनपर्छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईं यो कद्दू पाई र कन्डेन्स्ड दुध कि प्रयास गर्न रोक्न सक्नुहुन्न ...
ब्राउन र चीसेकेकको बाइट्स, ईन्सर्टिस्टेबल!
एकचोटि तपाईंले यी ब्राउनी र चीजकेकको टोकाइ प्रयोग गर्नुभयो, तिनीहरूलाई फेरि तयार पार्नु असम्भव हुनेछ। त्यो के हो ...
स्याउ र दालचिनी संग दलिया केक
एक मीठो टोकोको साथ हप्ता सुरू गर्न एक साधारण केक खोज्दै हुनुहुन्छ? बेजियामा हामी आज एउटा केक प्रस्ताव गर्छौं ...
यदि मैले तपाईंलाई भन्यो कि तपाईं यो मिठाई १० मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ, के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ? यो गिलास चकलेट, क्रीम र ...
फ्राइड डोनट्स मिठो वाइनको साथ
आज बेजियामा हामी फ्राइड डोनट्स तयार गर्दछौं, परम्परागत मिठोको साथ धेरै घरहरूले ईस्टरलाई मीठा पार्नेछन्। फ्राइड डोनट्स ...
साधारण दलिया दालचीनी चकलेट कुकीज
Simple० मिनेट भनेको तपाईले यी सरल ओटमील दालचीनी चकलेट कुकीज बनाउन आवश्यक छ। के साथ केहि कुकीहरू ...
क्रीम चीज फ्ल्यान र कन्डेन्स्ड दुध
द्वारा मारिया vazquez बनाउँछ5महिना .
आज हामी बेजियामा आफूलाई मिठो, अत्यन्त मीठो, सहज प्रयासको साथ व्यवहार गर्ने छौं। कसरी? एउटा क्रीम चीज फ्लान तयार गर्दै ...
बाक्लो दुई-टोन चकलेट र भनिला स्पंज केक
यस केकको टुक्रा को छ? आज तपाईलाई तयार पार्न हामी प्रोत्सुकन भएको बिकर स्पन्ज केक एक बाक्लो स्पन्ज केक हो…।
बदाम क्रीम कुकीज
सप्ताहन्त आउँदैछ र बेजियामा हामी मिठो व्यंजनहरू तयार पार्न चाहन्छौं। पछिल्लो यी कुकिजबाट ...
ओपेरा केक, मनाउन एक केक
हामी दुई बर्षदेखि बेजियामा यो रेसिपी प्रकाशित गर्न चाहन्छौं। ओपेरा केकले हामीलाई यसमा जित्यो ...
हामीले आज प्रस्ताव गरेको यो नुस्खा गत हप्ता tia_alia को इन्स्टाग्राम प्रोफाइलमा हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्‍यो, ...